Sharci Cusub Oo Ciyaartoyda Iyo Kooxaha Premier League Ku Qasbaya Inay Sameeyaan Arrimo Cusub Oo Lasoo Saarayo - Gool24.Net
Sharci Cusub Oo Ciyaartoyda Iyo Kooxaha Premier League Ku Qasbaya Inay Sameeyaan Arrimo Cusub Oo Lasoo Saarayo
Ciyaartoyda horyaalka Premier League ayaa laga doonayaa inay saxeexaan heshiis buuxa oo ay ku ogolaanayaan nidaamka badqabka ay kooxahoodu jideeyeen ka hor inta aanay kusoo laabanin tababarka wada-jirka ay ee si guud ay ciyaartoydu iyaga oo dhamaystiran u samayaan.
Kooxaha Ingiriiska ayaa Jimcaha May 15, samayn doona qiimayn la xidhiidha xaaladaha caafimaadka, waxaana natiijada soo baxday ay keeni doontaa inay codsiyo hor dhigaan ciyaartoygooda.
Sida uu ku warramay telefishanka Sky Sports, koox walba waxa looga baahan yahay in 0 ay saxeexaan heshiis ay ku ogolaanayaan inay tababarka diyaar u yihiin oo ay laacibiinta kale ee kooxda garoonka kula wadaagayaan.
Qoraal hor-dhac ah oo ku saabsan tilmaamaha wacyigelinta ee ay ciyaartoydu raaci doonaan marka uu tababarku soo laabto, ayaa waxa soo saaray Agaasimaha Kubadda cagta ee Richard Garlick waxaana saamilayda ay si qoto dheer uagaga doodeen shirkii Isniintii.
Qoraalkan qabyada ah oo la dhamaystiri doono, waxa uu waajibinayaa in dhamaan kooxuhu ay aqbalaan, kaddibna ay ciyaaryahannadooda ku wargeliyaan sida iyadoo caafimaadkooda la ilaalinayo ay haddana si wada-jir ah tababarka ugu samaynayaan.
Waxa intaas kaddib ay koox walba ciyaartoygeeda ka saxeexi doontaa heshiis qoraal ah oo qodobbadiisa ay ku jiraan siyaasadda lagu dhaqmayo inta uu jiro caabuqa Korona iyadoo wada shaqayn iyo aqoon kordhin loo samaynayo ciyaartoyda iyo shaqaalahaba.
Sharcigan waxa uu qasab kaga dhigayaa koox kasta inay magacowdo masuul ka tirsan kooxdeeda oo shaqadiisu tahay la tacaalista xanuunka iyo wacyigelintiisa ee gudaha kooxda. Masuulkan ayaa sidoo kale aan ka iman doonin shaqaalaha kooxda oo si madax-bannaan loo shaqaalaysiin doonaa.
Haddii ciyaartoy ama xubin ka tirsan shaqaalaha lagu arko astaamaha xanuunka amaba si rasmi ah looga helo fayraska, waxay karantiil ku jiri doonaan muddo toddoba cisho ah ka hor inta aan baadhitaan labaad lagu samaynin, loomana ogolaan doono dhamaan kiisaska inay kusoo laabtaan tababarka muddadaas.
Ciyaartoyda iyo shaqaalah safarka ugu maqan meel ka baxsan UK wixii ka dambeeyey March 23, waxa kaliya loo ogolaan doonaa inay kusoo laabtaan tababarka amaba ay ciyaartoyda kale soo dhex-galaan marka ay soo hdamaystaan laba toddobaad oo karantiil ah amaba ay soo gudbiyeen baadhitaan caddaynaya inay ka caafimaad qabaan kaddib soo laabashadooda.